मोफसलमा पत्रकारलाई ‘पर्यटनमा फिचर लेखन’ तालिम | Arthatantra.com
मोफसलमा पत्रकारलाई ‘पर्यटनमा फिचर लेखन’ तालिम
काठमाडौंः ‘पर्यटनमा फिचर लेखन’ तालिम सम्पन्न भएको छ । नेपाल पर्यटन पत्रकार मञ्चले नवलपरासीको पर्यटकिय क्षेत्र अमलटारी होमस्टेमा सञ्चालन गरेको दुईदिने तालिममा विभिन्न जिल्लाका २७ जना पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सञ्चार माध्यमको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा रहेका पर्यटकिय क्षेत्रहरुको प्रचार–प्रसार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर तालिमको आयोजना गरिएको थियो । उत्त तालिम नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष शिव गाँउले र मञ्चको सल्लाहकार समेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार तथा नेकपा (एमाले) पर्यटन विभाग प्रमुख सुर्य थापाले दिएका थिए ।
तालिम दिँदै गाँउलेले पर्यटनको विकासका लागि पत्रकारहरु गम्भिर रुपमा कलम चलाउनु पर्ने बताए । गाउँलेले पछिल्लो सयमा पर्यटकहरु नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, विभिन्न संस्कृती, हिमालका साथै विश्वकै कान्छो गणतन्त्र, भूकम्पपछिको नेपाल हेर्न आउने गरेको बताए ।
यता थापाले मुलुकको आर्थिक विकासमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । नेपालमा पर्यटकका लागि धेरै ठाँउ रहेको र प्रचार प्रसारको अभावमा चर्चामा आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रचार प्रसारमा आउन नसकेका ठाँउको पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार हुनुपर्यो, जसले गर्दा पर्यटक बढुन ।’
नेपालमा बसाई लम्ब्याउने पर्यटकको आवश्यकता रहेको भन्दै आफ्नो देशबाट ल्याएको खाना खाने र पानीका बोतल मात्र नेपालमा फाल्ने पर्यटकको कुनै आवश्यक नरहेको बताए ।
तालिममा पर्यटन बोर्डका सञ्चार शाखाका प्रमुख शरद प्रधानले पर्यटन बोर्डले पर्यटनको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गरि रहेको बताए । उनले नेपालका साथै विदेशमा पनि प्रचार प्रसारलाई तिब्रता दिएकोमा जोड दिए ।
यस्तै सोट्टो–नेपालका उपाध्यक्ष मधुसुदन उपाध्यायले रारा ताल लगाएतका क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढाउन आवश्यक काम गरिरहेको बताए । केही समय पहिला पाँच–सात हजार मात्र पर्यटक जाने रारा ताल क्षेत्रमा सोट्टोले प्रचार प्रसार सुरुगरेपछि यो संख्या दैनिक सयौंको संख्यामा बढेको बताए ।
मञ्चका अध्यक्ष विद्रोही गिरीले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न पत्रकार पनि जानकार हुनु पर्ने भन्दै पत्रकारको क्षमता विकास गर्न अभियानकै रुपमा तालिम लगायतका कार्यक्रम गर्ने बताए ।
नेपाल टेलिकममा नयाँ प्रबन्धक निर्देशकको खोजी, कसले दिन पाउँछन् त आवेदन ? काठमाडौं ।सरकारी स्वामित्वको रुपमा रहेको नेपाल टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छनौंट […]
तपाईसँग कुन कुन कम्पनीहरुको सेयर छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस् काठमाण्डौं । तपाई सेयर बजारको लगानीकर्ता हो ? यदि हो भने तपाईसँग कुन कुन कम्पनीको सेयर छ […]
घट्यो सुनको भाउ काठमाण्डौं । सुनको मूल्य प्रतितोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ५४ […]
बलीउडस्टार सलमान खानको घाँटीमा जुत्ताको माला किन ? एजेन्सी–बलीउडस्टार सलमान खानले यस बर्षको ईदमा आफ्ना प्रशंसकहरुलाई नयाँ फिल्म उपहार […]
सेयर बजारमा आज चार कम्पनीले गरे मूल्य समायोजन, हेर्नुहोस् एक कित्ता सेयरको कति ? काठमाण्डौं । शिखर ईन्स्योरेन्स, छिमेक लघुवित्त बिकास बैंक, नमस्ते बित्तीय संस्था र […]
दोषीलाई होईन निर्दाेषलाई मात्र थुन्ने यो कस्तो जेल ? एजेन्सी–विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजाय दिनका लागि जेलमा राख्ने चलन संसारका […]